War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ururka UDHIS ee London | Berberanews.com
Home QORMOOYIN War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ururka UDHIS ee London
War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ururka UDHIS ee London
Ururka UDHIS wuxuu u arkaa dhaqdhaqaaqa iyo socdaalada uu ku gaalaa bixinaayo Gudoomiyaha Ururka Wadani gobolada iyo degmooyinka Somaliland inay yihiin qaar sgarci daro ah oo kasoo horjeeda xeerka iyo qawaaniinta u dejisan hanaanka diiwaangelinta iyo axshax-dhawrista xisbiyada siyaasiga ah maadaama aan weli ururka Wadani la siinin ruqsad sharci ah oo uu ku bilaabo ollolle doorasho. Gudoomiyaha Wadani Mr Cabdiraxman Cirro wuxuu bilaabay inuu iska indho-iyo dhego tiro baaqyada kasoo yeedhaya Gudida Diiwaan-gelinta Ururada cusub, taas oo warsaxaafadeed ay soo saartay shalay 30 November 2011 ku cadaysay inay xaaraan tahay in la sameeyo ollole sdoorasho iyo dhaqdhaqaaq.
Mud: Cabdiraxmaan Ciro wuxuu shalay tegay magaalada Berbera halkaas oo uu dadka kala hadlay goob fagaare ah una sheegay inay “Reer Berbera codkooda siiyaan ururka wadani” oo uu sheegay inuu “yahay ka haya dawada bogsiinaysa cudurka haya Berbera.” Hadalkan ayaa ah cadayn inuu Cabdiraxman Cirro bilaabay ollole doorasho isagoon ururkiisa weli is diiwaan gelin lana siin ruqsad uu ku ollolleyo ama dhaqdhaqaaq siyaasi ah ku sameeyo.
Gudoomiya Ururka Wadani oo isagu ah Masuulkii ugu sareeyay ee golaha sharci dejinta (House of representatives) waxaa ku adkaatay inuu ixtiraamo sharciyadii uu isagu saxeexay oo uu si cad oo badheedh ah u garab maray, waana nin ay haatan ku cadaatay inuu damac qaawan iyo qarjajac ah ku doonayo inuu ku gaadho Madaxweynenimo . Sidaa daraadeed waxaan shacabka Somaliland u sheegaynaa inay ka digtoonaadaan sida uu wax u wado Cabdiraxman Ciro. Waayo tartanku wuxuu bilaabmaa marka siidhiga la yeedhiyo laakiin Cabdiraxman wuxuu ina leeyahay anigu waan sii ordayaaye isoo gaadha taasina waa sharci daro.
Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa Wasaarada Arrimaha Dibeda siday ay ka dhawaajiyeen Gudida Diiwaangelinta iyo Anshax-dhawrka Ururada cusubi inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ollole ee uu Cabdiraxman ka wado gobolada Somaliland waqtigan oo aan la fasixin ollole. Haddii kale waxaa rumoobaysa hadalkii Faysal Cali Waraabe ee uu yidhi Siilaanyaa ka danbeeya Cabdiraxman Cirro.
Ugu danbayn waxaanu leenay waar sharcigu si isku mid ah dadka ha u qabto Cabdiraxman Cirro-na ha loo sheego inaanu sharciga ka sarayn ee uu ixtiraamo. Waayo ninka ixtiraami waayay sharcigii uu isagu soo saaray mid kalena ma ixtiraami doono dadkuna kumaba aamini karaan mustaqbalkooda nin durba ku talaabsaday keli-talisnimo, hororsi iyo talo maroorsi. Wadani waxaa looga fadhiyaa inuu soo dhamaystiro qaab dhismeedkiisa. Sidii Dr Gaboose sheegay xataa lama yaqaan gudoomiye ku xigeenka Wadani waayo waa xisbi nin leeyahay.
Af-hayeenka UDHIS UK branch
Yassin Maxamed Ismaaciil
Previous articleShirkadaha Dahabshiil Group oo ka Dhex Muuqday Hirgelinta Tartanka Ciyaaraha Gobollada Somaliland
Next articleMadaxweynaha Jabuuti oo daboolka ka qaaday xilliga uu Siyaasadda ka fadhiisanayo iyo meesha uu ku noolaan doono
30 Sanno iyo Somaliland: WQ Barkhad Jaamac Batuun
Fidmada Horyaal Tv Islaamka iyo Somaliland gaadhsiiyay maxaa u daawo ah?
Muuse Biixi & Maalgashiga dalka!